I-Inrico T298s 3G / Wifi VHF Radio 137-174 MHz (i-Android ivuliwe) i-EU / UK / Australia -IiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / IiRadio / IiRadiyo zenethiwekhi / I-Inrico T298s 3G / Wifi VHF Radio 137-174 MHz (ivuliwe i-Android) i-EU / UK / Australia
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 2 amanqaku umthengi
(2 ncomo ngumthengi)
Le nguqulo ine-Android emsulwa. Lumkela ukhuphiswano oluthengisa iinguqulelo zefirmware ezingayi kuvumela ukufakela usetyenziso olusuka kwiPlayStore. Ukuba sele uthengile kumthengisi owahlukileyo, kuya kufuneka faka i-T298s ivuliwe i-firmware Ukukhuphela iiapps zerediyo ezithandwayo.
I-Inrico T298s ngonomathotholo womnatha onesigqithisi se-VHF FM esigxunyekwe esivumela i-100%. Nokuba yiseli okanye unomathotholo, uya kuhlala uqhagamshelwe.
Unokuseta ii-TX kunye nee-RX frequency frequency, kunye neenkqubo ze-CTCSS zokusebenzisa kunye nokuphindaphinda okuqhelekileyo.
Jonga enye Imijelo ephilayo. Le radio iyakuthumela ngeZello efakwe kwangaphambili.
Ukuba uyayidinga le radio kwishishini, kuya kufuneka uqwalasele ukuyisebenzisa Umsebenzi kaZello (ukusuka kwi $ 61.20 / yr) okanye PTT4U (ukusuka kwi- $ 59.00 / yr)
Udidi: IiRadiyo zenethiwekhi
Le radio yenethiwekhi iyahambelana ngokupheleleyo Inethiwekhi yerediyo yamanye amazwe (IRN)
Ngaba isengoku irediyo? Funda oku inqaku.
Ngaba ujonge iiradiyo zendlela ezimbini? Ufumene eyona venkile ilungileyo!
Ungathini ukuba unokuba nefayile ye- usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows kwifowuni yakho? Makhe sikwazise nge-app ye-walkie talkie ye-app eyakhe yenziwa: I-Zello yi-app ye-walkie talkie ye-android, iphone, i-IOS kwaye kukho ne-zello ye-PC.
Le fowuni ifana nonomathotholo ine-PTT eya kuthi inyuse umthumeli. Ukuya kuthi ga ngoku une-dataplan okanye uqhagamshelo lweWiFi, emva koko unayo Iindlela ezimbini ze-walkie talkie app Uluhlu lwehlabathi liphela.
Ekuqaleni, khuphela usetyenziso lweZello. Emva koko, cinezela eyakho iqhosha le-Zello PTT kwaye uya kuviwa!
Unokuba nonxibelelwano lwangasese olu-1-to-1, okanye unxibelelwano olu-1 ukuya-oluninzi kwisiteshi sangasese se-zello. Zininzi iindlela zello zoluntu, ezineenjongo ezahlukeneyo, kwihlabathi liphela.
Ezinye iinethiwekhi ze-hamradio RF ziqhagamshelwe kwiziteshi zabucala zeZello Ngaloo ndlela, ukuba unelayisenisi, unokuhlala kwi-intanethi kunye ne-zello kwaye ube ne-QSO kunye nabahlobo bakho be-ham. Zininzi ii-zellos kwihlabathi liphela. Ngaba ungathanda ukuba ngomnye wabo? 🙂
Wamkelekile kwi-Zello PTT walkie talkie world!
Inkxaso yenethiwekhi: GSM900 / 1800 MHz, WCDMA2100
Amaxesha aBalaseleyo: 1.0 Ghz
Iqonga: MTK 6572A
Inkqubo yokuSebenza: i-Android 4.4.2
Imemori: 32Gb + 4Gb
Imemori eyandisiweyo: ukuya kuthi ga kwi-32Gb
Amandla eBhetri: 3500mAh
Ukuboniswa kweScreen TP: 2.4QVGA 240 * 32 point-touch touch screen
I-Intercom kwihlabathi liphela
Iikhamera ngaphambili nangasemva, zijolise ngokuzenzekelayo
Ukuma okumandla okungaphezulu kweeyure ezingama-800
Isithethi esingama-32 ubukhulu esinamagumbi amabini
Inkqubo yokubeka ixhasa iGPS + BeiDou
Inkxaso yeWIFI / BT / MP3 / MP4
Umgca wedatha weMICRO 5PIN
Uyilo olukhuselayo lwe-IP54, umgangatho wasemkhosini
Inguqulelo yeVHF (137-174 MHz)
Inguqu ye-UHF (400-470 MHz)
Amandla: 5 W
Isatifikethi: Isatifikethi se-FCC Rohs
umthamo Battery: 3500mAh
Uninzi lwabathwali behlabathi baxhasa le modeli. Nangona kunjalo, e-US, yi-AT & T kuphela exhasa esi sixhobo.
Khuphela i-Inrico T298s Isikhokelo semiyalelo
2 kwakhona ngenxa I-Inrico T298s 3G / Wifi VHF Radio 137-174 MHz (ivuliwe i-Android) i-EU / UK / Australia
I-CT1EIZ - Disemba 5, 2017
Jonga ukuba zingangqwabalala kangakanani ezi radiyo: https://www.youtube.com/watch?v=WyPIDvEmXJk
Ixesha 2E0CXQ - Disemba 23, 2017
Ndonwabe kakhulu yile radio irhabaxa, yenziwe kakuhle. usebenze ngqo ngaphandle kwebhokisi xa sele uqhagamshelwe kwi-wifi. Umceli mngeni kuphela kukufaka ulwazi njengekhibhodi ekwiskrini encinci kwaye ngeminwe emikhulu ithathe umzamo. Ndine-zello kunye ne-IRN esebenzayo, akukho miba. Ufumene iividiyo zakho kwiYouTube ziluncedo kakhulu, enkosi.
Yongeza kwakhona Rhoxisa impendulo
I-Inrico TM-7 3G / WiFi IRN Iselfowuni yenethiwekhi yeRadiyo (i-Android ivuliwe)
ikaliwe 4.83 ngaphandle 5
Sale! $299 $249 Ngeza kwitshathi
I-Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi (ivuliwe i-Android)
$349 Ngeza kwitshathi
I-Inrico T368 4G/Wifi/UHF DMR 400-470MHz (iPhakeji yeDeluxe)
$599 Khetha ukhetho
I-Boxchip S900A+ UHF FM Analog/DMR 4G Smartphone Transceiver
Sale! $799 $699 Khetha ukhetho
IBoxchip S900B kunye ne-4G / LTE
Sale! $499 $449 ukuze ngoku
I-Senhaix N60 4G / i-WiFi
Isipikha seSithethi esiphathwayo seRadio-Tone RT4